कसरी पिउने पानी ? - जिस्ट खबर अर्थात यथार्थ खबर
गर्मी मौसममा शरीरलाई बढी पानी आवश्यक पर्छ । यो समयमा मानिसको शरीरबाट पसिना बढी बग्ने कारण जति पानी बाहिरिन्छ, कम्तीमा उति नै पानी दिनभरमा पिउनैपर्छ । श्रम गर्ने एक वयस्क व्यक्तिको शरीरबाट दिनभरमा दिसा, पिसाब, पसिना र बाफका माध्यमबाट २२ सयदेखि २५ सय मिलिलिटरसम्म पानी बाहिर निस्कन्छ । यो पानी पुनः शरीरमा पूर्ति गर्नु आवश्यक हुन्छ । तर, कुन समयमा पिउँदा बढी लाभ प्राप्त हुन्छ भन्ने धेरैलाई जानकारी हुँदैन । पानी पिउने सही तरिकाबारे योग तथा भोजन विशेषज्ञ डा. राजु अधिकारीको सुझाब यस्तो छ :
हरेक दिन बिहान उठ्नेबित्तिकै दुईदेखि तीन गिलास पानी पिउनु आवश्यक हुन्छ । यसलाई उषापान भनिन्छ । मुख कुल्ला नगरी मुखको र्‍यालसमेत पानीसँगै पिउनु उषापान हो । यसले स्वास्थ्यलाई निकै फाइदा गर्छ । बेलुकैदेखि तामाको भाँडामा राखिएको चिसो पानी पिउन सकिन्छ । तामाको भाँडामा राखिएको पानी पिउनु स्वस्थकर मानिन्छ । उषापानमा सेवन गरिने पानीले शारीरको आन्तरिक शुद्धीकरण गर्दै पाचन प्रणाली सबल बनाउँछ । शारीरिक एवं मानसिक रूपमा शीतलता एवं सौम्यता प्रदान गर्दछ । जहिलेसुकै खाली पेटमा पानी पिउँदा शरीरमा बल प्राप्त हुन्छ ।
राति सुत्नुभन्दा आधा या एक घन्टाअघि एक गिलास पानी पिउनु राम्रो हुन्छ । यतिखेर खाएको पानीले रातको समयमा हुने हृदयाघातको खतरालाई घटाउँछ ।
खाना खाँदै दुई–चार घुड्की पानी पिउँदा औषधिको काम गर्छ । तर, खाना खाइसकेपछि तुरुन्तै पानी पिउनु भने विषसरह हुन्छ । यसैले मुख्य भोजन गरेको एक घन्टाअघि या एक घन्टापछि मात्रै पानी पिउनु शरीरका लागि स्वस्थकर मानिन्छ ।
आयुर्वेदिक मान्यताअनुसार अजीर्ण, अपच तथा कब्जियतजस्ता समस्यामा पानी पिउनुलाई अमृत पिएबराबर मानिन्छ । त्यसैले सधैँ नै हरेक एक–एक घन्टाको अन्तरमा पानी पिउने बानी विकास गर्नु राम्रो मानिन्छ ।
नुहाएपछि एक गिलास पानी पिउनु राम्रो हुन्छ । यतिवेला पिएको पानीले रक्तचाप नियन्त्रणमा राख्न सहयोग गर्छ ।
पानी पिउँदा घुटुघुटु गर्दै मुखको र्‍याल मिसिने मौका दिनुपर्छ । तातो दूध पिएजसरी चुस्की लिँदै पिएको पानी औषधिजस्तै मानिन्छ । यसैगरी पानी पिउँदा उभिएरभन्दा बसेर पिउनु राम्रो हुन्छ । -नयाँ पत्रिका बाट